नयाँ दैनिक | पठाएको म्यासेज डिलिट गर्न मिल्छ, कसरी ? पठाएको म्यासेज डिलिट गर्न मिल्छ, कसरी ? – नयाँ दैनिक
तर मेसेन्जरमा पठाइएका मेसेजहरु निश्चित समयमा डिलिट गरिसक्नु पर्नेछ । अर्थात् यसरी मेसेज डिलिट गर्न चाहनेले मेसेज पठाएको १० मिनेट भित्रमा डिलिट गर्नुपर्नेछ । अन्यथा प्रापकको च्याटबक्सबाट मेसेज हट्ने छैनन् । मेसेन्जरमा थप गरिएको त्यो फिचर ह्वाट्सएपको डिलिट फर एभ्रिवन फिचर जस्तै रहेको छ ।
तपाईंले कसैलाई मेसेन्जरमा पठाएको मेसेजमा ट्याप गर्ने । १० मिनेट भित्रमा त्यो गरिसकेको हुनुपर्नेछ । त्यसरी ट्याप गर्दा तपाईंले पहिले देख्ने गरेको delete बटनको साटो Remove for you, र Remove for everyone गरी दुई विकल्प हुनेछन् । यदि तपाईंले दोस्रो अप्सनमा ट्याप गर्नुभएमा तपाईंले पठाएको सो मेसेज प्रापकको च्याटबक्सबाट पनि डिलिट हुनेछ । एजेन्सी